१५ मिनेटमै निखार ल्याउने मुंग दालको फेसप्याक
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २८ फागुन
व्यस्त जीवनशैलीसँगै सुन्दर हुने रहर सबैको हुन्छ । तर, सुन्दर बन्नका लागि पार्लर गइरहने समय निकाल्न समेत मुस्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरमै केही उपाय निकाल्न सकियो भने समयको सदुपयोग, पैसाको बचत सँगै आर्कषक बन्न सकिन्छ । यसका लागि मुंग दालको फेस प्याक उपयोगी बन्न सक्छ ।
मुंग दालको फेस प्याकका लागि आवश्यक सामग्री
मुंग दालको फेस प्याक बनाउनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू एक पटक खरिद गरेपछि करिब १ महिना सम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ । किनकि यसमा कुनै पनि आइटम छिटै बिग्रने खालका हुँदैनन् ।
१ मुंग दाल
२ गुलाब जल
४ बदामको तेल
फेसप्याक बनाउने विधि
शनिबार तपाईं प्याक लगाउने हो भने शुक्रबार राति २ चम्चा दाल पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् । अझै धेरै अनुहारमा चमक चाहानु हुन्छ भने दाल गुलाब जलमा भिजाउनुहोस् ।
प्याक लगाउने विधि
बिहान उठेर रातभरि भिजाइराखेको दाललाई पिसेर पेस्ट बनाउनुहोस् । यसरी तयार पारिएको पेस्टमा आधा चम्चा मह मिसाई अनुहार र घाँटीमा लगाई १५ मिनेट राख्नुहोस् । जब प्याक सुक्छ तब गुलाब जल वा पानीले अनुहारलाई हल्का भिजाउनुहोस् र स्क्राब गर्नुहोस् ।
सफा गर्ने तरिका
स्क्रब पछि अब सफा पानीले अनुहार धुनुहोस् । कटनको कपडाले अनुहार र गर्दनमा पुछ्नुहोस् । त्यसपछि बदामको तेलले अनुहार र गर्दनमा बिस्तारै बिस्तारै मसाज गर्नुहोस् ।
फेस प्याकको फाइदा
मुंग दालको फेस प्याकलाई अनुहारमा लगाएपछि अनुहारमा चमक आउनुका साथै ड्यामेज सेल्सको रिपेयर गर्दछ । प्याकमा मिसाइएको महले मोइश्चराइजरको काम गर्दछ । यस्तै, गुलाब जलले छालामा मेलानिन असरलाई कम गरी छालामा निखार ल्याउँछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६, ०५:२७:००
देश संकटमा परेकाे बेला कहाँ छन् डा. गोविन्द केसी ?
जनस्वास्थ्यविज्ञ भन्छन् : १ महिना कहर काटे कोरोनालाई जित्‍न सक्छौँ
वैज्ञानिक भन्छन् : कोरोनाले बदल्न सक्छ मानवीय व्यवहार